Ngokucophelela izinsimbi emhlophe phezu stem izimisele namahlamvu elikhanyayo namanzi - uzothola nabo ehlathini, emthunzini edolobheni zezimbali. ukunambitheka yabo okubabayo akakwazi kudidaniswe omunye nomunye. Kuyini kulesi simangaliso? Yiqiniso, neminduze esigodini! Izimpawu kwentwasahlobo, injabulo, babehlale ukukhulisa ukumamatheka ezinganeni nakubantu abadala, ushiya akekho ngabandayo. Lily nesigodi banikezele iculo, izinkondlo netiphicaphicwano. Kulesi sihloko, sethula ezihlukahlukene puzzle mayelana lily esigodini, evesini bese temibhalo yephrozi netindzaba, elula neyinkimbinkimbi.
Ngokuvamile kukhona izimfihlakalo mayelana lily we esigodini emavesini. Emfushane, sonorous esimnandi, zingabantu nsé naleli izingane.
On imilenze oluhlaza ubuhlungu.
Ngaphansi kocingo esangweni,
Thanda buhlalu yezinhlamvu,
Little mhlophe ...
On izinsika oluhlaza ilandelana
izibani ethambile hang.
Izimbali entwasahlobo, ngezinye izikhathi
Thola kwalo emthunzini yehlathi:
On the stem, efana ubuhlalu ilandelana,
izimbali White hang.
Ngo sadochke yami,
On the stebelechke oluhlaza
Ezinye puzzle mayelana neminduze esigodini ukuze izingane asifanele kakhulu. Ngokwesibonelo, mayelana amajikijolo zalesi sitshalo:
Beautiful futhi usentekenteke, amehlo musa Dabula,
kodwa uma udle - ushevu futhi ngokushesha afe.
Ngakolunye uhlangothi, izimfihlakalo ezinjalo mayelana lily we esigodini banelungelo ukuba sibe khona, ngakho siyatshelwa mayelana izakhiwo ezibalulekile zalesi sihlahla. Ngempela, kunzima ukukholelwa ukuthi enhle, amajikijolo namanzi lily ebulalayo.
Eshukunyiswe lily we esigodini
Nezimfumbe mayelana lily we esigodini ingasetshenziswa izifundo thematic umlando wemvelo, kokubili njengeqembu nangabantu elifudumele-up, futhi wokwenziwa kweengaba zokugcina umsebenzi, uma kukhona ukuhlanganiswa impahla kanye nekucabangisisa.
Ukusebenzisa izibonelo puzzle, izingane ungakha ngalokujulile ematheksthi abo ngendlela efanayo. Ungase futhi umeme abafundi ukubamba iqhaza igalari thematic imidwebo kanye yezandla ku. Uma isifundo senzeka entwasahlobo, ukhetho best kungaba ukuhamba ehlathini noma epaki - umcimbi "Umhlangano ne lily we esigodini" Siyaqiniseka ukunxusa bonke abantwana!
I Palms Ihhotela Apts 3 * (Limassol, Cyprus): incazelo ehhotela, izilinganiso
"Cefepime" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa